Golaha amaanka “UNPOS waa la kala dirayaa” – idalenews.com
Golaha amaanka “UNPOS waa la kala dirayaa”
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa ka shirey arrimaha Soomaaliya, waxaana warbixin laga dhagaystey sargaal sare oo Qaramada Midoobey ka tirsan.
Jeffrey Feltman kaaliyaha xoghayaha guud ee arrimaha siyaasadda, isaga oo ka hor hadlayay 15-ka xubnood ee golaha amaanka ayaa waxa uu sheegey in ay muhiim tahay in la hirgaliyo qaraarkii bishii hore uu goluhu gaaray ee lagu kala dirayay xafiiska siyaasadda Soomaaliya qaabilsan ee UNPOS ee uu madaxda ka yahay Augustina Mahiga.
Waxaa badalaya xafiis cusub oo dalka gudihiisa laga dhisayo, kaasi oo gacan siin doona sidii loo fulin lahaa qorshe hawleedka lixda muhiimadood ee dowladda Soomaaliya.
Jeffrey Feltman waxa uu amaanay dowladda Soomaaliya oo uu sheegey in ay ku talaabsatay arrimo waaweyn, maamulkeedana gaarsiineyso dalka intiisa kale.
Waxase uu hoosta ka xariiqey in gobolada qaar dalka laga diidey qorshaha dowladda ay maamulada ugu magacaabayso gobolada, tusaale ahaan Jubbaland oo sedex gobol dadka degen ay ansixiyeen dastuur.
Waxa uu sheegey maadaamaa hawlgalka AMISOM uu gaarayo xadkii loogu talogalay, in ay daruuri tahay in la helo qorshe amaan oo beesha caalamka taageerto, kaasi oo ay qasab tahay in uu dhidibada u aaso ciidan Soomaaliyeed oo ku filan amaanka iyo xasiloonida dalka, kaasi oo hadhoow suurogalin doona in beesha caalamka lagaga maarmo amaanka Soomaaliya.
Sida ay sheegayaan illo wareegyo lagu kalsoonyahay, waxaa jira qorshe ciidamo nabad illaalin oo Qaramada Midoobey ka socda dalka lagu geeynayo, kuwaasoo badalaya kuwa AMISOM ee dalka jooga.
Arrimahani waxa ay ka turjumayaan siyaasad cusub oo Qaramada Midoobeyso dooneyso in ay Soomaaliya kula macaamisho, iyadoo ay muuqato in markani la ixtiraamayo dowladnimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa meel kasta oo aduunka ka mid ah waxa uu gaarsiiyey fariin cad oo ah in aysan waxbo hagaagi doonin illaa la tixgaliyo madax banaanida Soomaaliya, islamarkaasina Soomaaliya laga taageero oo kaliya waxa ay iyadu codsato.
Arday Soomaaliyeed oo wacdaro ka dhigey garoomada Turkiga (Daawo sawirada)